‘जिरो कोभिड’ नीतिमा अल्झिएको चीनको कोभिडविरुद्धको संघर्ष – Health Post Nepal
‘जिरो कोभिड’ नीतिमा अल्झिएको चीनको कोभिडविरुद्धको संघर्ष
२०७८ चैत ८ गते ११:१०
काठमाडौं–चीनले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न विश्वमै सबैभन्दा कठोर नियम लागू गर्‍यो। यसका बावजूद चीन र हङकङमा संक्रमण दुई वर्षयताकै उच्च देखिएको छ।
अधिकांश मुलुक कोरोना भाइरससँग बाँच्न संघर्ष गरिरहेका बेला चीनमा ‘जिरो कोभिड’ नीति कति दिनसम्म टिक्न सक्छ? अहिले यो महत्वपूर्ण प्रश्न भएको छ।
२ वर्षको बीचमा कोरोना नियन्त्रणका लागि चीनले लकडाउन र कडा प्रतिबन्धको सहारा लियो। र, त्यो प्रतिबन्धको असर देखियो पनि।
सन् २०२० मा विश्वमा कोरोनाका कारण हुने मृत्युको आँकडा बढ्दै गरेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले लकडाउनसहित अन्य कठोर प्रतिबन्धमार्फत् कोरोना महामारीको व्यवस्थापन गरेको भन्दै चीनको सफलताको प्रशंसा गरे। कोरोना महामारीको सामना गर्न चीनले अपनाएको उपाय प्रभावकारी साबित भएको उनको भनाइ थियो।
त्यसपछि चीन र हङकङमा जिरो कोभिड मोडल लागू गरियो। तर अवस्था सोचेजस्तो रहेन।
यो मोडलमाथि पहिलो धक्का त्यतिबेला लाग्यो, जतिबेला कोरोनाको डेल्टा भेरियन्टका बिरामी बढेपछि २०२१ मा पुनः लकडाउन लगाउन चीन बाध्य भयो। त्यसपछि प्रश्न सिर्जना भयो–चीनले जिरो कोभिड नीतिलाई कतिसमयसम्म कायम राख्न सक्ला? र, अब ओमिक्रोन भेरियन्ट तीव्र रुपमा फैलँदै गर्दा यो प्रश्न पुनः उठेको छ।
चीनमा अहिले दैनिक हजारौं संक्रमित भेटिन थालेका छन्। अहिले कोरोनाको चपेटामा उत्तरपूर्वी प्रान्त जिलिन परेको छ। त्यहाँ लकडाउन लगाइएको छ। कोरोनाको सुरुवाती अवस्थामा वुहानमा लकडाउन लगाइएको थियो। त्यसपछि लकडाउन झेल्ने प्रान्त जिलिन भएको छ।
हालसम्म कोरोनाले नछोएको मानिएको हङकङका यतिखेर दैनिक २० हजार संक्रमित थपिइरहेका छन् भने २ सय जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। सहरमा स्वास्थ्य व्यवस्थामा संकट देखा पर्न थालेको छ। अस्पतालबाहिर बिरामीहरुको उपचार भइरहेको छ।
आधिकारिक रुपमा चीनले आफ्नो जिरो कोभिड नीति डगमगाउन दिने विषयमा केही संकेत गरेको छैन। तर महामारीको सामना गर्नका लागि आफ्नो कार्यशैलीमा केही नरमपना भने देखाएको छ।
यसै साता चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले आफ्नो नियममा परिवर्तन गरिरहेको उल्लेख गर्दै हल्का लक्षण देखिएकाहरुलाई अस्पताल लैजानुको साटो कोभिड सेन्टरमा उपचार गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। क्वारेन्टाइन सेन्टरबाट बिरामी डिस्चार्ज गर्ने प्रक्रियालाई पनि लचिलो बनाइएको छ।
यसअघि चीनले हल्का लक्षण भएका सबै बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने नियम लगाएको थियो।
हङकङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जिन डोङ यानले भने, ‘अब स्थानीय स्तरमै आइसोलेसनमा राख्ने प्रस्ताव गर्न थालिएको छ र बढी सहयोग आवश्यकता भएकाहरुको संख्या पनि धेरै छ।’
हालै सम्पन्न चीनको नेशनल पिपुल्स कांग्रेसको बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले चीनले कोभिडबाट लड्न वैज्ञानिक र लक्ष्यआधारित नीति बनाउने बताएका थिए। सिंगापुरको राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका प्राध्यापक चेन गेंग भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री लीको भाषणबाट सरकार अबका दिनमा प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन तयार रहेको संकेत मिल्छ।’
गत वर्ष चीनका महामारी विज्ञ झाङ वेनहोङले चीनले भाइरसका साथ जिउनुपर्ने बताएका थिए। यसपछि उनको आलोचना भएको थियो। चीनको कोभिडविरुद्धको नीतिलाई कमजोर गर्नका लागि विदेशीसँग मिलेको आरोप पनि उनलाई लगाइएको थियो।
यसैसाता उनको एक सन्देश चिनियाँ सामाजिक सन्जालमा पोस्ट भएको थियो। त्यसको भने अलग्गै प्रतिक्रिया आएको छ। उनले भनेका थिए–अहिले जिरो कोभिड रणनीतिलाई कायमै राख्नु जरुरी छ। साथै भविष्यमा बढी सामना गर्ने खालको रणनीतितर्फ अघि बढ्नबाट डराउनु हुँदैन।
उनले भाइरसको डर कम गर्न आवश्यक कदम उठाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै जुन देशमा व्यापक खोप अभियान चलाइएको छ र प्राकृतिक संक्रमण दर हासिल भएको छ, त्यहाँ ओमिक्रोन निकै हल्का पाइएको र ती मुलुकमा फ्लुभन्दा पनि कम घातक हुनसक्ने बताएका थिए।
यसपटक उनको आलोचना नभई व्यापक प्रशंसा भयो। विगतमा लकडाउनबाट आफ्नो स्वतन्त्रता समाप्त भएको भन्नेहरुले नै उनको प्रशंसा गरेका छन्।
काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्समा वैश्विक स्वास्थ्यका सिनियर फेलो हुवाङ यानजोङले जिरो कोभिडका लागि जनसमर्थनमा व्यापक गिरावट आएको बताएका छन्। खासगरी सांघाईजस्ता ठूला सहरका मानिसहरु यसलाई ‘अति भयो’ भन्न थालेका छन्।
यद्यपि केही विशेषज्ञहरुले प्रतिबन्ध खुकुलो पार्दा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली झन् धराशायी हुने र मृत्युदरमा भारी वृद्धि हुने बताएका छन्। उनीहरु शवगृह र अस्पताल बिरामीले भरिएको हङकङको जस्तो अवस्था आउनसक्नेतर्पm पनि सचेत गराउँछन्।
प्राध्यापक चेन भन्छन्, ‘यदि प्रतिबन्ध खुकुलो पारियो भने मृतकको संख्या बढ्नेछ, जसबाट समाजमा घवराहट बढ्न सक्छ।’
राष्ट्रपति सीले गत बिहीबारको पोलिटब्युरोको बैठकमा चीन आफ्नो जिरो कोभिड पोलिसीको नीतिमा कायम रहने बताएका थिए।